Uncategorized Archives : Snacks Mandalay
By Snacks Mandalay | December 18, 2019 | 0
ဖြူရာဒနျ(Furadan) ကို တောငျသူတို့က မွအေောငျးပိုးသတျဆေးအဖွဈသိရှိနားလညျ သုံးစှဲခဲ့ကွသညျ။ Furadan သညျ မွတှေငျးပိုးမြားသာမက မွပေျေါရှိ အငျးဆကျပိုးမှားမြားကို သစေနေိုငျသညျ့အပွငျ Furadan ကိုအသုံးပွု၍ စိုကျပြိုးသော သီးနှံမြားတှငျဓာတုဓါတျကွှငျးကနျြရှိ၍ ထိုသီးနှံကိုစားသုံးသူမြား ကငျဆာဖွဈစနေိုငျသညျအထိ အန်တရာယျမြားသော အဆိပျပွငျးသညျ့ ပိုးသတျဆေးတဈမြိုးဖွဈပါသညျ။ နိုငျငံတကာတှငျ Furadan ကိုပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့အသုံးပွုကွသညျ။ မစိုကျပြိုးခငျ မွအေောငျးပိုးမြားကိုရှငျးလငျးရနျအသုံးပွုခွငျး၊ စိုကျပြိုးနစေဥျပိုးမှားအန်တရာယျကငျးရှငျးရနျပကျဖွနျးအသုံးပွုခွငျး၊ လယောဥျပျေါမှ ပကျဖွနျးခွငျးစသဖွငျ့ အသုံးပွုကွသညျ။ ထိုသို့အသုံးပွုခွငျးကွောငျ့ ငှကျမြားစှာသဆေုံးခွငျး၊ ဆေးဖွနျးသောစိုကျခငျးထဲသို့ ဝငျသောတောငျသူမြားရှုရှိုကျမိ၍ မူးမေ့၊ အော့အနျ၊ ဆေးရုံတကျရခွငျး၊ လကျအိတျမဝတျဘဲ တိုကျရိုကျထိတှမေိ့သောတောငျသူမြားသညျ လကျမြားနီရဲလာ၍ အသကျရှုကွပျကာ အရေးပျေါဆေးရုံတငျရခွငျး စသဖွငျ့ အသကျအန်တရာယျနှငျ့ အလှနျနီးကပျစှာ ကွုံတှရေ့သညျ။ ထိုသူမြား နောကျဆကျတှဲ ဖွဈနိုငျသညျ့ ရောဂါမှာ ကငျဆာရောဂါဖွဈသညျ။ ထိုသို့တိုကျရိုကျထိတှသေူ့မြားအတှကျ အန်တရာယျအလှနျပွငျးထနျသော ပိုးသတျဆေး၏ ဓာတျကွှငျးအန်တရာယျကို သိရှိနိုငျရနျ…
By pyaephyoaye | July 17, 2019 | 0
အားလုံးအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဟင်းလျာလေးတစ်ပွဲဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် ငြုပ်ကြမ်းမှုန့်လေးတွေကမပါမဖြစ်ပေါ့ အခုလိုမျိုး အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာထဲမှာထည့်ချက်မဲ့ ငြုပ်ကြမ်းမှုန့်လေးတွေက အရည်အသွေးကောင်းဖို့အဓိကကျလှပါတယ် ဆိုးဆေးတွေသုံးထားတဲ့ မှိုတတ်နေတဲ့ ငြုပ်သီးမှုန့်တွေဟာဆိုရင် သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေပါတယ် ကြယ်သုံးပွင့်က ထုတ်တဲ့ အော်ဂန်းနစ် ငြုပ်အကြမ်းမှုန့်လေးတွေဟာဆိုရင် ……….. 🌶🌶🌶မန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် အခြောက်ခံရုံ ( Solar Dryer Parabola Dome ) ဖြင့် အခြောက်ခံထားခြင်း 🌶🌶🌶 ​မှိုအဆိပ် ( Aflatoxin ) မပါဝင်စေရန် ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထုတ်လုပ်ထုတ်ပိုးထားခြင်း 🌶🌶🌶 နိုင်ငံတကာ စားသောက်ကုန်ထုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စံချိန် စံညွှန်းများဖြစ်သော ISO 22000 , GMP & HACCP နှင့်အညီထုတ်ပိုးထားခြင်း 🌶🌶🌶 နယ်သာလန်နိုင်ငံမှပေးအပ်သော EU…
By Snacks Mandalay | July 17, 2019 | 0
မှိုတတ်ပြီးဆိုးဆေးပါဝင်တဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေစားမိတဲ့အခါဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့ 🥺အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း 🥺သွေးအန်ခြင်း တို့အစပျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ 🥺အသည်းကိုပါ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ရုံသာမက သွေးအန်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် 🤷‍♀️ဒါ့အပြင် ငရုတ်သီးမှုန့်မှာ ပါဝင်တဲ့ အယ်ဖာတောက်ဆင် ( မှိုအဆိပ်) က အသည်းကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပြီး အသည်းထဲမှာ အရွက်တည်ခြင်း နှင့် အသည်းကြွပ် ၊ အသည်းခြောက်ခြင်း တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာမလို့ အရမ်းကိုကြောက်စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်ရှင့် 😍စာဖတ်ပရိသတ်တို့ရော စာဖတ်ရင်းကြောချမ်းသွားပြီးလား အဲ့တော့ ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်း မှိုတတ်ပြီး အရောင်အရမ်းတောက်နေတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေကိုနောက်မစားတော့ပဲ ကြယ်သုံးပွင့်ကထုတ် မှိုနံ့လုံးဝမပါတဲ့ ငရုတ်သီးထုတ်တွေကိုပဲဝယ်ယူအားပေးကြတော့နော် 👍ဒီ့ပို့(စ်) လေးကို တခြား Chillies လေးတွေလည်းသိရအောင် လိုက်(ခ်) နှင့် ရှဲလေးလုပ်ပြီးမျှဝေပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော် #Threestarsmyanmar #Organic_products #product_of_Myanmar #chili #Aflatoxin #spicy #shopping #cooking #receipe
By itadmin@snacksmandalay.com | July 5, 2018 | 0
Orgranic အစားအစာများကို ဘာကြောင့် ၀ယ်ယူအသုံးပြု့သင့်သလဲ ???🌶🌶 Orgranic အစားအစာဆိုတာက အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီစွာ ထုတ်လုပ် ထားသော အစားအစာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် လူအများစုက Orgranicအစားအစာများကို စားသုံးခြင်းဟာ Non-orgranic အစားအသောက်များထက် အဟာရတန်ဖိုး ပိုမိုရရှိစေတယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Orgranicအစားအစာများ အဖြစ် ဈေးကွက်တွင် ဖြန့်ချိရန် Organic ဖြစ်ကြောင်း အထူးအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိရန် လိုအပ်ပါသေးတယ်(ဥပမာ USDA)။ Orgranic Vs Non-Orgranic Orgranicနှင့် non-orgranic အဓိက ကွာခြားချက်ကတော့ ဓာတုဆိုးဆေးများ ပါဝင်မှု ကျန်းမာရေးအတွက် မစားသုံးသင့်သော ဒြပ်ကြွင်းများ ပါဝင်မှုရှိ မရှိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Organic အစားအစာဆိုတာ ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အစားအစာတွေမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ ဆိုးဆေးတွေ၊ တာရှည်ခံဆေးတွေနဲ့ အဆိပ်သင့်ဓါတုပစ္စည်းတွေ…
🌶ငြုပ်သီးမှုန့်တော်တော်များများမှာ မှိုတွေ၊ ဆိုးဆေးတွေပါလို့ မစားရဲ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု ယူလာပါပြီ!!!🤗 ငြုပ်သီးမှုန့်တွေဆိုတာက မြန်မာဟင်းတော်တော်များများ ချက်ရာမှာ မပါမဖြစ်အရာတစ်ခု! ဒါပေမဲ့ ငြုပ်သီးမှုန့်တွေကို စိုက်တဲ့အခါ နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ သန့်ရှင်းမှုမရှိရင် မှိုဆိပ်ပါတတ်တာတွေ၊ အရောင်လှအောင် ဆိုးဆေးတွေ တစ်အားထည့်ပြီး ထုတ်လုပ်ကြတာတွေများလာတော့ တော်တော်များများက မစားရဲသလောက်ပါပဲ။ အဲ့ထဲမှာ နန္ဒာလည်းပါပါတယ်။ ပါဆို…ဟိုးးအရင်တစ်ခေါက်က ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ ငြုပ်သီးအခြောက်တောင့်တွေထဲမှာ မှိုတွေပါလာတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားလိုက်ရတာကိုး..အဲ့တည်းက ငြုပ်သီးမှုန့်တွေကို မသုံးမဖြစ်အနေအထားမှာပဲ ပါတယ်ဆိုရုံသုံးဖြစ်လာတာ ဒီ ငြုပ်သီးမှုန့် Brand ကို မတွေ့ခင်ထိပါပဲ။ 💁🏻‍♀️သူ့ကတော့ သူထုတ်လုပ်တဲ့ ငြုပ်သီးမှုန့်တွေထဲမှာ Aflatoxin ဆိုတဲ့ အန္တရာယ်ရှိ မှိုဆိပ် နဲ့ ဆိုးဆေး လုံးဝမပါဝင်ကြောင်း အာမခံနဲ့ ရောင်းနေတဲ့ “Three Stars(ကြယ်သုံးပွင့်)” ဆိုတဲ့ Brand…
By itadmin@snacksmandalay.com | April 24, 2018 | 0
We are committed to deliver high quality, safe and hygienic spice products applying with statutory and regulatory requirements related to ISO9001, GMP, HACCP & FSSC22000. This commitment will be demonstrated with the implementation of clear and measurable food safety management system throughout our supply chain,acontinuous focus on improving our systems and process to…
စားသောက်ကုန် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး မူဝါဒ
ကျွန်ုပ်တို့ ကြယ်သုံးပွင့်စက်ရုံမှ စားသောက်ကုန် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး ဥပဒေသများ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ISO9001, GMP, HACCP နှင့် FSSC22000 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီအရည်အသွေးပြည့်ဝသော၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို ထုတ်လုပ်ထုတ်ပိုးပါမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ ဤကတိကို စက်ရုံ၏ ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောထုတ်လုပ်စဉ် လုပ်ငန်းတစ်လျှောက် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး တိုင်းတာ၍ရသော စားသောက်ကုန် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းသော စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် ပြသပါမည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ပြီး အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ အစဉ် ကောင်းမွန်သေချာအောင် ကြိုးစားပါမည်။ ဤမူဝါဒကို စက်ရုံ၏ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်တိုင်းတွင် ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်မှန်မှန် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့် စားသုံးသူ ကျေနပ်မှုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အားလည်း ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။…